किन हुन्छ सबै फिल्ममा साम्राज्ञीको उस्तै रोल ? « Ramailo छ
किन हुन्छ सबै फिल्ममा साम्राज्ञीको उस्तै रोल ?
डेव्यु फिल्म ‘ड्रिम्स’ सहित युवा स्टार साम्राज्ञीराज्य लक्ष्मी शाहले पाँच वटा फिल्ममा अभिनय गरकी छन् । साम्राज्ञी अभिनित २ फिल्म कायरा र ईन्टु मिन्टु लण्डनमाले ट्रेलर तथा टिजर सार्वजनिक गरेर प्रचार प्रसार सुरु गरेका छन् । यी दई फिल्मको जनरा एउटै हो, लभ स्टोरी ।
दुई लभ स्टोरी फिल्ममा साम्राज्ञी सोलो हिरोइन हुन् । सोलो हिरोइनको क्यारेक्टर यी फिल्ममा समान छ भन्दा फरक नर्पला । पहिलो फिल्म ‘ड्रिम्स’देखि ‘ईन्टु मिन्टु लण्डन’मा सम्म साम्राज्ञीको भूमिका एकै खाले भएको प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । साम्राज्ञी हरेक फिल्ममा किन एकै प्रकारका भूमिका गर्छिन् त ?
‘मलाई जस्तो अफर आयो त्यस्तो नै गर्ने हो’, बिहिबारको ईन्टु मिन्टु लण्डनमाको प्रोमो लञ्ज कार्यक्रममा साम्राज्ञीले सुनाइन्, ‘मलाई त्यस्तो फरक रोलको अप्रोज नै आएको छैन । मलाई जस्तो आउँछ त्यस्तै भूमिका गर्छु ।’ तर अप्रोज आएको फिल्म किन छाडि रहनु भएको छ ? भन्ने प्रति प्रश्नमा छायाँकन फिल्मको सुटिंग जुधेका कारण प्रस्ताव आएका सबै फिल्ममा काम गर्न नसकेको साम्राज्ञीले बताइन् । यो भिडियो हेर्नुस् :
‘छक्का पञ्जा ३’ मा पनि सुटिंग जुधेकै कारण खेल्न नसकेको साम्राज्ञीले बताइन् । सुवास गिरीले बनाउने फिल्म भैरवी मा आफु अनुबन्धित भैनसकेको उनले खुलाइन् । जे होस् साम्राज्ञी अहिलेकी हट केक हुन् । यद्पी यी हटकेकले फिल्म छानेर भिन्न भिन्न भूमिका गर्न भने आवश्क छ ।